လိပ်ခေါင်းရောဂါရဲ့ နောက်ဆက်တွဲပြသနာများ - Hello Sayarwon
လိပ်ခေါင်းရောဂါကို ဂရုမစိုက်ဘဲပစ်ထားရင် ဘာတွေဖြစ်လာမှာလဲ ??
ဝမ်းသွားတဲ့အခါ သွေးပါလာတယ်။ စအိုတဝိုက်က စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းနဲ့ နေရခက်တယ်။ စအိုတဝိုက်က နာသလိုလို ယားသလိုလိုဖြစ်နေတယ် ဆိုရင် လိပ်ခေါင်းရောဂါ ခံစားနေရတာပါ။ လိပ်ခေါင်းရောဂါက ပြင်းထန်တဲ့ ကျန်းမာရေး ပြဿနာ မဟုတ်ပေမယ့် နေ့စဉ်ဘဝကို တော်တော်လေး ထိခိုက်စေပြီး စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာ တစ်ခုပေါ့။ မပြင်းထန်ဘူးဆိုပေမယ့် သေသေချာချာ ကုသဖို့ လိုပါမယ်။ လိပ်ခေါင်းကို သေချာ မကုသဘဲ ထားတာက နောက်ဆက်တွဲ ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေကို ဖြစ်လာစေဖို့ လက်ယပ်ခေါ်ရာ ရောက်ပါတယ်။
လိပ်ခေါင်းရောဂါ ဆိုတာက အစာဟောင်းအိမ် အောက်ပိုင်းနဲ့ စအိုမှာ ရှိတဲ့ သွေးပြန်ကြောတွေ ရောင်ရမ်းနေတာပါ။ သွေးကြောထုံးရောဂါနဲ့ ဆင်တူပါတယ်။ ဖောင်းနေတဲ့ သွေးကြောတွေက အပြင်ဘက်ကို ထွက်လာတာပါ။ ဒီအခြေအနေက နေရထိုင်ရ ခက်သလို တော်တော်လေး နာကျင်ပါတယ်။
လိပ်ခေါင်းရောဂါက အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ၄ ဦးမှာ ၃ ဦးလောက် ခံစားနေရတဲ့ ကျန်းမာရေး ပြဿနာ တစ်ရပ်ပါ။ လိပ်ခေါင်းကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေက အများကြီး ရှိပေမယ့် ဘာ​ကြောင့် လိပ်ခေါင်းဖြစ်ရတာလဲ ဆိုတာကို သေသေချာချာ မသိတဲ့ အခါမျိုးလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။
လိပ်ခေါင်းရောဂါက အမျိုးအစားကွဲသလို ခံစားရတဲ့ လက္ခဏာတွေလည်း ကွာခြားနိုင်ပါတယ်။
အပြင် လိပ်ခေါင်းဆိုတာက စအိုတဝိုက် အရေပြား အောက်ဘက်မှာ ဖြစ်တဲ့ လိပ်ခေါင်းရောဂါပါ။
စအို တဝိုက်က ယားယံမယ်၊ စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းဖြစ်မယ်။
အတွင်းလိပ်ခေါင်း ဆိုတာက အစာဟောင်းအိမ် အတွင်းဘက်မှာ ရှိနေတာပါ။ မြင်ရဖို့ မဖြစ်နိုင်သလို အတွင်းလိပ်ခေါင်း ဖြစ်နေမှန်း သတိထားမိဖို့တောင် ခက်ပါတယ်။ ကသိကအောင့် ခံစားမိတာမျိုးကတောင် ဖြစ်တောင့် ဖြစ်ခဲပါ။ ဒါပေမယ့် ဝမ်းသွားတဲ့အခါမှာတော့
နာကျင်မှုမရှိဘဲ သွေးထွက်တာ။ အိမ်သာခွက် ဒါမှမဟုတ် တစ်သျှူးစမှာ သွေးပေနေတာမျိုး တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။
နာကျင်မှု၊ စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်း ခံစားရမှုနဲ့အတူ စအိုကနေတဆင့် လိပ်ခေါင်း ထွက်လာတာမျိုး ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
အပြင်လိပ်ခေါင်းကြောင့် သွေးထွက်ပြီး သွေးခဲ ပိတ်ဆို့သွားတဲ့ အခြေအနေပါ။ ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါ
စအိုတဝိုက်မှာ ခပ်မာမာ အဖုဖြစ်တာတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
လိပ်ခေါင်း ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်း
လိပ်ခေါင်းဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ အစာဟောင်းအိမ် အောက်ပိုင်းမှာ ဖိအား များနေတာကြောင့်ပါ။
အိမ်သာမှာ အချိန်ကြာမြင့်စွာ ထိုင်တာ
အမျှင်ဓာတ်ပါတဲ့ အစားအစာတွေ အစားနည်းတာ
အမြဲ အလေးအပင် မတာတွေကြောင့် လိပ်ခေါင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
လိပ်ခေါင်းကြောင့် နောက်ဆက်တွဲ ဘာတွေ ဖြစ်လာနိုင်လဲ။
လိပ်ခေါင်းကို သေချာ မကုသဘဲ ထားမယ်ဆိုရင် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကတော့ အများကြီးရှိပါတယ်။ တိုက်ရိုက်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ပြဿနာတွေရှိသလို တဆင့်ခံပြဿနာတွေလည်းရှိပါတယ်။
အချိန်တိုအတွင်းဖြစ်လာမဲ့ အန္တရာယ်တွေရှိသလို တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပိုဆိုးလာမဲ့ အန္တရာယ်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ တွေ့ရအများဆုံးပြဿနာတွေကတော့..
နာတာရှည် လိပ်ခေါင်းကြောင့် အမြဲလိုလို သွေးထွက်ရာက အချိန်ကြာမြင့်စွာ သွေးဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်မယ်ဆိုရင် အကျိုးဆက်အနေနဲ့ သွေးအားနည်းရောဂါ ခံစားလာရနိုင်ပါတယ်။
သွေးအားနည်းခြင်းကြောင့် မောပန်းနုန်းခွေနေတာ၊ ကိုယ်ခံအားနည်းလာတာ၊ အစားအသောက်ပျက်လာတာ၊ မူးဝေတာ၊ အထိုင်အထ မိုက်ခနဲဖြစ်တာ မျက်စိပြာတာတွေဖြစ်လာနိုင်သလို နောက်ဆုံးမှာ သွေးအားနည်းနှလုံးရောဂါကတဆင့် နှလုံးပျက်စီးတာအထိဖြစ်နိုင်တာကြောင့် မပေါ့ဆသင့်ပါဘူး။
လိပ်ခေါင်းပုပ်ခြင်း (Strangulated hemorrhoid)
အတွင်းလိပ်ခေါင်းဆီကို သွေးစီးဆင်းမှု ပြတ်တောက်သွားတဲ့အခါ မခံမရပ်နိုင်အောင် နာကျင်မှုကို ခံစားရတဲ့ အခြေအနေ တစ်ရပ်ပါ။
လိပ်ခေါင်းထဲက သွေးတွေ ခဲသွားပြီး သွေးခဲ ပိတ်ဆို့တဲ့ အခြေအနေပါ။ အသက်အန္တရာယ် မရှိနိုင်ဘူးဆိုပေမယ့် မခံမရပ်နိုင်အောင် နာကျင်တာမျိုး၊ လိုအပ်ရင် ခွဲထုတ်ရတာ၊ ဖောက်ထုတ်ရတာမျိုးတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။
လိပ်ခေါင်းကို ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေ ဝင်ရောက်ကူးစက်မှုကြောင့် အနားတဝိုက်က တစ်ရှူးတွေ ပိုးဝင်ကူးစက်တဲ့ အခြေအနေမျိုးပါ။ ဒီလို ပိုးဝင်ကူးစက်တာကို သေချာ မကုသဘဲ ထားမယ်ဆိုရင် တစ်ရှူး ပုပ်တာ၊ အဖျားတက်တာ၊ ပြည်တည်နာ ဖြစ်တာလိုမျိုး ပြင်းထန်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
စအိုအတွင်းဘက် အမြှေးပါးက အပြင်ဘက်ကို ကျွံထွက်လာပြီး ထိုင်တဲ့အခါ ဝမ်းသွားတဲ့အခါ နာကျင်တာနဲ့ မအီမသာ ခံစားရတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
လိပ်ခေါင်းကို ဘယ်လို ကာကွယ်မလဲ
လိပ်ခေါင်းကို ကာကွယ်နိုင်မယ့် အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းက ဝမ်းပျော့ပျော့ မှန်မှန် သွားစေဖို့ပါပဲ။ ဒီတော့ လိပ်ခေါင်း ကာကွယ်ဖို့ဆိုရင်တော့ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ အချက်လေးတွေကို ဂရုတစိုက် လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုပါမယ်။
အမျှင်ဓာတ် များတာတွေ စားပေးပါ။ ဝမ်းပျော့ပျော့သွားစေဖို့ အထောက်အပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။
ရေများများသောက်ပါ။ တစ်နေ့ကို ရေ ၈ ခွက် သောက်ပါ။ အယ်လ်ကိုဟော နဲ့ ကဖင်းကိုတော့ ရှောင်ပါ။
အမျှင်ဓာတ်ပါတဲ့ ဖြည့်စွက်စာတွေ မှီဝဲပါ။
ဝမ်းကို အားနဲ့ ညှစ်ပြီး မသွားပါနဲ့။
အိမ်သာမှာ အကြာကြီး ထိုင်တာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။ အိမ်သာမှာ အကြာကြီးထိုင်တာက စအိုတဝိုက်က သွေးကြောတွေကို ဖိအားများစေပါတယ်။
Hemorrhoids https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hemorrhoids/symptoms-causes/syc-20360268 Accessed Date 17 July 2020
What Are the Different Types of Hemorrhoids? https://www.healthline.com/health/types-of-hemorrhoids Accessed Date 17 July 2020
Hemorrhoids: Signs, Symptoms, and Complications https://www.verywellhealth.com/hemorrhoids-signs-symptoms-and-complications-4160936 Accessed Date 17 July 2020
Haemorrhoids https://www.healthdirect.gov.au/haemorrhoids-piles Accessed Date 17 July 2020
လိပ်ခေါင်းရောဂါ တိုက်ဖျက်ဖို့ ဒါတွေစားကြစို့